फिलिप्स SHB9850NC हेडफोनको समीक्षा - समाचार नियम
यो फिलिप्स SHB9850NCs मूल्य तल आउँदै सभ्य वायरलेस हल्ला-रद्द हेडफोन को राम्रो उदाहरण हो. व्यावहारिक दोहोरो वर्ष को एक जोडी पहिले बराबर प्रदर्शन संग एक सेट लागत हुनेछ.
नवीनतम फिलिप्स ब्लुटुथ वायरलेस हल्ला-रद्द हेडफोन सही कुरा को एक धेरै, तर केही niggles द्वारा hampered छन्
शीर्षक यो लेख “फिलिप्स SHB9850NC हेडफोन समीक्षा: हल्ला बैंक भंग बिना रद्द” शमूएल गिब्स द्वारा लेखिएको थियो, लागि बिहीबार 18 औं फरवरी मा theguardian.com 2016 07.00 UTC
फिलिप्स गरेको नवीनतम हल्ला-रद्द ब्लुटुथ हेडफोन डिब्बे को एक हल्के सेट मा प्रिमियम सुविधाहरूमा प्याक गर्न प्रयास बैंक भंग बिना.
मध्य-दायरा फिलिप्स SHB9850NCs एप्पल गरेको बीट्स द्वारा kickstarted को ओभरसाइजगरिएको र Brightly-रंग पुस्ता भन्दा क्लासिक हेडफोन थप akin छन् कि माथि-कान हेडफोन को एक अपेक्षाकृत सूक्ष्म सेट छन्.
यो SHB9850NC हेडफोन अप गुना वा बैग मा उनलाई फिट मदत गर्न समतल राख्नु सक्नुहुन्छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
कम्पैक्ट डिजाइन कप कान तर अरू धेरै, एक स्लिम तर सहज शीर्ष दल संलग्न र राम्रो तकिये कान कप, पनि जो जाडो महिनामा न्यानो आफ्नो कान राख्न.
प्रत्येक कप एक चमकदार प्लास्टिक बाहिरी छ, सम्भवतः जो अपेक्षाकृत सजिलै अंक देखाउने, छोटो समयमा खरोंच noticeably टिप्न म तिनीहरूलाई परीक्षण गरिएको छ.
तिनीहरू एक अपेक्षाकृत सानो प्याकेज मा अप गुना, जो अन्य बिट र टुक्रा मा समातिए गर्न एक झोला मा फेंक गर्न सजिलो र असम्भाव्य छ.
सही-हात कान कप पावर बटन छ, हेडफोन पोर्ट र स्पर्श नियन्त्रण, को फिलिप्स लोगो मार्फत सफा गरेर सक्रिय. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
सही-हात कान कप स्पर्श नियन्त्रण छ, अन पाइने समान सुगा Zik हेडफोन लाइन. एक एकल ट्याप गर्नुहोस् खेल्छ वा संगीत विराम, माथि सफा वा तल मात्रा समायोजित, जबकि बाँकी सफा वा दायाँ ट्रयाक skips. राम्रो ट्रयाक छोड्दै काम गर्दछ, रूपमा यसलाई अलिकति ढिलो पनि यदि मात्रा समायोजन गर्छ, तर टेप वा संगीत रोक्न गर्न छोएर अविश्वसनीय छ, राम्रो नजर छैन - तपाईंले प्राय अन्त बारम्बार सार्वजनिक मा कान मा आफैलाई मार अर्थ.
अन्य बटन अन-अफ बटन समावेश, र त एक कि पाइप को earphones मा पृष्ठभूमि हल्ला घोषणाहरू लागि बाहिर सुन्न वा मान्छे कुरा गर्न एक मोड रद्द हल्ला वा स्विच सक्रिय. वा बन्द ब्लुटुथ सक्रिय एउटा बटन र तार सुन्न लागि एक मानक हेडफोन पोर्ट पनि त्यहाँ.
तिनीहरूलाई पेयर धेरै राम्रो कुनै पनि एन्ड्रोइड स्मार्टफोन संग बायाँ कान कप मा एक-ट्याप गर्नुहोस् संग NFC प्रयोग सजिलो छ. अरूलाई म्यानुअल ब्लुटुथ बटन तल समातेर जोडी हुनेछ.
ब्लुटुथ जेब मा फोन गर्न जडान अन्य उपकरणहरू कुनै पनि हस्तक्षेप बिना स्थिर थियो, यस्तो smartwatch वा फिटनेस ब्यान्ड रूपमा. हेडफोन एकैचोटि दुई उपकरणहरू जडान गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं एक ट्याब्लेट र स्मार्टफोन छ भने जो सजिला छ, र उपयुक्त उपकरणहरू संग उच्च गुणस्तरको जडानहरू लागि समर्थन aptX र AAC.
मैले देखे एक अनौठो कुरा तिनीहरूले कहिले काँही कुनै स्पष्ट कारण लागि एउटा गीत को बीचमा संगीत रोक्न भनेर छ. यो एक पटक हरेक पाँच या त एल्बम मात्र हुनेछ, तर म समस्या थियो के अलग गर्न सकेन.
ध्वनि र अलग
यो हल्ला रद्द अवरुद्ध पृष्ठभूमि ड्रोन मा राम्रो छ, मोबाइल फोन एक सबै थप स्पष्ट वक्ता संग पारस्परिक गर्दा जस्तै विद्युत हल्ला सिर्जना बनाउने. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
हेडफोन सभ्य ध्वनि, अचाक्ली मूख्य बास बिना राम्रो सन्तुलन संग. thundering thumps लागि देख ती अन्यत्र हेर्न हुनेछ. तिनीहरूले व्यक्तिगत साधन बाहिर छानिएको, तर कहिले काँही बीचमा दायरा मा एक बिट मड्डी सुनिन्थ्यो. म चाहन्छु रूपमा पडकास्ट मा आवाज छैन रूपमा स्पष्ट थिए. गुणस्तर हल्ला बन्द रद्द संग एक सानो परिवर्तन, संगीत एउटा अलि बढी ऊर्जावान ध्वनि बनाउन.
रद्द भएको हल्ला पृष्ठभूमि hums र drones बाहिर अवरुद्ध मा प्रभावकारी थियो. तर यो यस्तो आवाज अन्य ध्वनि बाहिर अवरुद्ध मा विशेष राम्रो थियो, र संगीत बजाई बिना तिनीहरूले accentuated थिए.
सबैभन्दा कष्टप्रद बिट पृष्ठभूमिमा स्थिर विद्युत रोएको थियो, जो अचाक्ली संगीत बजाई साथ श्रव्य थिएन, तर संगीत रोकिएको वा शान्त खण्डहरू समयमा थियो थियो. यो जडित ब्लुटुथ स्रोत संग सबै भन्दा प्रचलित हुन देखिन्थ्यो र सिर्जना हल्ला समान सुनिन्थ्यो एक मोबाइल फोन संकेत एक वक्ता संग interferes गर्दा.
फिट र समाप्त
को earcup भित्र वक्ताले समेट्छ कि जाल को तल कठिन प्लास्टिक गांठ केही चिन्ता तपाईं सक्छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
हेडफोन राम्रो तरिकाले फिट, प्रकाश महसुस तर आफ्नो टाउको मा सुरक्षित र विस्तारित सुन्न लागि सहज छन्, आफ्नो कान अलि बाहिर छडी नभएसम्म. तिनीहरूले प्रत्येक कान कप मा वक्ताले कवर कपडे भित्र एक हार्ड प्लास्टिक वर्ग छ. मेरो कान विरुद्ध विश्राम र एक समय पछि असहज भए. तिनीहरूलाई प्रयास गर्ने अरूलाई नै समस्या ग्रस्त थिएन, त्यसैले यसलाई आफ्नो earlobes बाहिर छडी कति निर्भर. म मेरो धेरै टाढा बाहिर फँस अवगत थियो, तर स्पष्ट केही अरूले भन्दा.
ब्याट्री जीवन उत्कृष्ट थियो, वरिपरि स्थायी 15 शुल्क बीच घण्टा. सजिलै हल्ला मा रद्द संग रुपान्तरितको एक हप्ताको लायक बच्न पर्याप्त. चार्ज गर्ने microUSB पोर्ट को हेडबैंड हात अन्तर्गत हेडफोन को शीर्ष मा लुकेको प्रयोग एक घण्टा भन्दा बढी बस लिए.
यो microsUSB पोर्ट को हेडबैंड गर्न earcup जडान हात पछाडि लुकेको छ, जो चिटिक्क देखिन्छ, तर तपाईंले तिनीहरूलाई लगाउने सक्दैन शुल्कबाट गर्दा अर्थ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
यो फिलिप्स SHB9850NCs £ 130 को लागि उपलब्ध छन्. तुलना गर्ने लागि PLANTRONICS Backbeat प्रो खर्च £ 190 र सुगा Zik 2.0 खर्च £ 300. तार हल्ला-रद्द हेडफोन वरिपरि £ 100 मा सुरु.
यो हल्ला रद्द राम्रो छ, यस फिट र वजन उत्कृष्ट छन् र ब्याट्री जीवन ठोस छ. त्यहाँ बस एउटा साँच्चै तल हेडफोन गरौं भनेर niggles जोडी हो, अर्थात् धेरै रिस विद्युत रुनु, कान कप मा finickity नियन्त्रण र अनौठो कडा गांठ, जो तपाईं को लागि एक मुद्दा हुन सक्छ वा.
पेशेवरों: प्रकाश, संकुचित, राम्रो पृष्ठभूमि सा रद्द, ठोस ब्लुटुथ जडान र ब्याट्री जीवन
नकारात्मक: कष्टप्रद विद्युत रुनु, को earphones मा हार्ड गांठ, निष्क्रिय ध्वनि अलग राम्रो हुन सक्छ, तिनीहरूले हुनुपर्छ रूपमा रूपमा उत्तरदायी नियन्त्रण
यो हेडबैंड प्रकाश र सहज हुन गद्दी को धेरै आवश्यकता बिना टाउको माथि राम्रो फिट. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
सबै भन्दा राम्रो ब्लुटुथ हेडफोन पाँच केबल को मुक्त गर्न
सबै भन्दा राम्रो हल्ला-रद्द हेडफोन को छह यात्रा चुपचाप
← नयाँ मंगल मानचित्र नियमित मानिसहरूले लागि डिजाइन गरिएको 14 समय गुगल वास्तवमा कसैको जीवन सुरक्षित [Ranker] →